Akaita Sei Makuru Idhi Kuongorora Akave Akakosha kune DSPs | Martech Zone
Big data analytics rave riri dombo repakona kune zvinobudirira kushambadzira zvirongwa uye adtech kwemakore akati wandei ikozvino. Iine zviverengero zvekusimudzira iyo pfungwa yeakakura data analytics 'kushanda, iri nyore pombi yekutsanangudza mukati mekambani yako, uye zvingangoita kuti iwe utaridzike kuva wakanaka kune uyo akaikurudzira.
Big data analytics inoongorora yakakura swaths yedata (sezita zvarinoreva) uye inobvumira vaongorori kuti vashandise iyo data kuti vawane mapatani, misika maitiro uye demographic zvido uye mushandisi maitiro. Iwe unobva waisa iyo data muchiito nekuibvumira iyo kutungamira ine ruzivo bhizinesi sarudzo. Iri kutora zvidimbu zvakakura zveruzivo nekuzvidzora kuita zvidiki, zvechokwadi-nguva sarudzo idzo dzakaratidza kuve dzakanakira kune ese marudzi emabhizimusi kutenderera pasirese.
Kudiwa-Kurutivi Mapuratifomu (DSPs), zvitende kana kwete, gadzirira kukohwa zvinorema kubva mukukwira kwedata hombe analytics, uye ndokusaka:
Ita Zvisarudzo Zvakadzidziswa
Iyo DSP inzira yekumhanyisa maitiro ekutenga yekushambadzira nzvimbo uye mukati mekureruka kweimwe chete interface.
Sechikamu cheketani yekutsvaga mu kupa uye kudiwa kutenderera kwehupfumi - DSPs inobatsirwa kubva pamikana inowanikwa nedata hombe analytics nekushandisa ruzivo rwavanogamuchira.
Mukutaura kwema layman, maDSP anokwanisa kukurumidza kuunganidza, iwo musika wese wemikana yekushambadzira pane imwechete interface. Izvi zvinobvumidza agency kana timu yekutengesa kuti isarudze kwekutenga nzvimbo yekushambadzira kumushandirapamwe wavo unotevera. Pamusoro pemutsara DSPs inoshandisa akakosha maalgorithms mune imwe mamiriseconds kubvumira vashambadziri kuti vawane yepamusoro-tier madhiri.
Chizvarwa chinotevera analytics injini senge SQream chinangwa chekurerutsa maitiro nesimba rinowedzera iyo analytics kugadzirisa nenzira inoshamisa kwazvo, ichibvumira masayendisiti e data uye vaongorori kuti vagadzire ruzivo rwakakodzera nekukurumidza sezvazvinogona kuita munzvimbo dzakakura kwazvo. Injini dzakadai dzinodzora kubvunza kunonoka kwemibvunzo yakaoma pamadhata makuru, ichibvumira maDatha Masayendisiti kuve anobudirira, kuwana mhando dzemhando nekukurumidza uye kuisa mhando mukugadzirwa nekukurumidza. Kana iyo modhi iri nani, kukodzera kuri nani kumushandisi, mutengo webhidhi wakakwira, uye mutengo wakakwira unowedzera chiyero chebid / win.
Icho chinangwa chese chekushambadzira ndechekuwedzera kukosha kwekambani yako nekuwedzera kutengesa uye ndizvo chaizvo zvakakura dhata analytics shanda pamwe chete neDSPs. Nokubudirira zvinobudirira kuburikidza neakakura swaths e data, iwe uri kubvumidza kushambadzira optimization kuti iitwe pane nhunzi. Uye mune ino kesi, iwe hausi kungokanda zvinhu kumadziro wakamirira kuti uone zvinonamira, iwe uri kunyatso kuita sarudzo dzakajeka nedata rekutsigira.
Zvinotora hunyanzvi hwakaomarara hwekuongorora kuti uzere zvakakwana nemurwi we data uye nehunyanzvi. Dzimwe nguva, iyo dhata yedhata iwe yaunoda kuti uite yako yakanyanya-ruzivo rwekushambadzira zano itsono mune yehuswa. Nekushandisa sevhisi yeDSPs, zvikwata zvekushambadzira uye / kana vamiririri vanokwanisa kuzvipinza mumikana yakanakisa, vachivimbisa kudzoka kwakanyanya mukudyara pamwe nekubhadhara mapeni padhora kutenga nzvimbo yekushambadzira. DSPs inokohwa mabhenefiti akakura nekuve nedata hombe rakabatanidzwa mune ayo algorithms, ichiita iyo yekutengesa poindi inoenderana nehuwandu kune vangangove vatengi.
Shandisa Zvizere iyo Nhamba
Kuongorora kukuru kwedata inzira yakaoma yekufamba mukati uye yega. Nekubuda kwayo uye kukosha kwayo kutsva mumunda wekushambadzira, DSPs vanokwanisa kubatsirwa kubva kune iyi data nekuzvinyora mumatanho ayo. Nekuve nemurwi muhombe wedata yekugara, maDSPs ave kuita zvinoenderana pano uye izvozvi nekunyora huwandu hweruzivo uye kuhuparadzira munzira dzakakodzera dzekushambadzira uye kushambadzira vamiririri.
Semuenzaniso, data hombe rinopa nhamba dzeboka revanhu, uye maDSP anozozvinyora nenzira yakakodzera. Nekuongorora ruzivo mamwe mapuratifomu ari kuunganidza, hombe data analytics inotibvumidza kubvunza mibvunzo, kuwana ruzivo rwakakosha. Kudiwa-Kurutivi Vashambadziri (DSAs) vachashandisa izvi, vobva vapa makambani nzira dzakanakisa dzekushambadzira kuiswa. DSPs anga ari mumwe wevanonyanya kubatsira kune iyo ruzivo rwakakura ruzivo rwekuongorora.
Zvakaoma kuona kuti ndiani anonyanya kubatsirwa kubva pane zvakasara mhedzisiro yedata hombe analytics. Kubvira payakadzvinyirirwa mupasi rekushambadzira zvakanyanya, takaona vanobatsira vazhinji, asi hapana chakajeka sevaya vanoshandisa maDSP. Nekushandisa iyo ruzivo rwunowanikwa kuburikidza nehukuru data analytics, DSPs chazove chigadzirwa chiri nani chekushambadzira uye kushambadzira madhipatimendi.
Icho chinangwa chese chekushambadzira ndechekuwedzera kukosha kwekambani yako ne kuwedzera kutengesa uye ndizvo chaizvo zvakakura sei data analytics shanda pamwe chete neDSPs.
Nekushandisa iko kusevenzesa kweDSPs, zvikwata zvekushambadzira zvinokwanisa kuzviisa mukati meakanakisa mikana, kuvimbisa iyo yakanakisa kudzoka mukudyara parutivi kubhadhara peni padhora kutenga nzvimbo yekushambadzira
Pasina kupokana, DSPs dzinopa mikana iri nani yekuvandudza ROI pane kushambadzira.
Tags: Analyticsbig datayakakura data analyticsdata sciencedata sainzikudiwa padivi chikuvadspoptimize purofitisqream